Baadshaho (2017) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
IMDB: 4.9/10 4326 votes
Ajay Devgn, Emraan Hashmi, Esha Gupta, Ileana D'Cruz, Priyanshu Chatterjee, Sanjay Mishra, Sharad Kelkar, Sunny Leone, Vidyut Jammwal
1975-1977 နှဈတှမှော အိန်ဒိယနိုငျငံဟာ အရေးခငျးကာလဖွဈပွီး အရေးပျေါထုတျပွနျခကျြတှေ ထုတျပွနျထားပွီး တိုငျးပွညျရဲ့ လူဦးရေ တဈဝကျလောကျက ဆန်ဒတှပွေ သပိတျတှေ မှောကျပွီး ထောငျထဲတှေ ရောကျနပေါတယျ။ အစိုးရဆိုတာ နာမညျသာ ရှိပွီး ပွညျသူလူထုကို ကွညျ့ရှုစောငျ့ရှောကျနိုငျတာကလညျး ဆိုငျရာ ဆိုငျရာ အကွီးအကဲတှေ ဘုရငျမြိုးရိုးဟောငျးတှပေဲ တာဝနျယူစောငျ့ရှောကျပေးနတောပါ။ ရာဂဈြတနျ မွို့ကိုလညျး ဘုရငျကွီး ဆုံးပါးသှားပမေယျ့ အသကျအရှယျနဲ့ မလိုကျအောငျ ကိုငျတှယျဖွရှေငျးနိုငျတဲ့ မငျးသမီး ဂီတနျဂလြီက ကူညီပေးနပေါတယျ။
ဘုရငျစနဈက ဖွတျသိမျးလိုကျပွီး ဘုရငျ့အခှနျထမျး စနဈလညျး မရှိတောပမေယျ့ မြိုးရိုးစဉျဆကျ ပိုငျဆိုငျလာတဲ့ ဘဏ်ဍာတှနေဲ့ပဲ ပွညျသူတှကေို ထောကျပံ့နပေါတယျ။ ပွသာနာရဲ့ အစပဲ ပွောရမလား ပါတီတဈခုမှာ အစိုးရအာဏာကို လှဲအပျထားတဲ့ ဆနျဂြီးဒျဆိုတဲ့ အာဏာပိုငျက အမြိုးသမီးတဈဦးတညျး ဖွဈတဲ့ ဂီတနျဂလြီကို ထိကပါးယိကပါးလုပျမယျကွံပမေယျ့ ဘုရငျ့သှေးဖွဈတဲ့ ဂီတနျဂလြီကို ထိလို့တောငျ မရခဲ့ပါဘူး။ ပါတီပှဲက လူပုံအလယျမှာ အရှကျကှဲခဲ့ရတဲ့ ဆနျဂြီးဒျက ရှကျရမျးရမျးပွီး ယုတျမာဖို့ ကွံစညျပါတော့တယျ။ ဘုရငျစနဈဖွတျသိမျးပွီး ဘုရငျ့အခှနျစနဈ ဖွတျသိမျးလိုကျရငျ ဘုရငျမြိုးရိုးတှကေ ပိုငျဆိုငျသမြှ ဘဏ်ဍာအားလုံးကို အစိုးရလကျထဲကို ပွနျအပျရပါတယျ။ ဂီတနျဂလြီကတော့ တိုငျးရေးပွညျရေး အခကျအခဲတှမှော သူ့လကျအောကျက ပွညျသူတှေ အတှကျ အသုံးခဖြို့ ဘဏ်ဍာတှကေို မအပျခဲ့ပါဘူး။ ဒီဘဏ်ဍာတှရှေိတာကို သိပွီး ဆနျဂြီးဒျ ယုတျမာပါတော့တယျ။
အာဏာကို အလှဲသုံးစားလုပျပွီး ဘဏ်ဍာတှကေို အပိုငျသိမျးပွီး ဂီတနျဂလြီကို ဖမျးခြုပျခဲ့ပါတော့တယျ့။ ဘဏ်ဍာအားလုံးကို ဒလေီက ဆနျဂြီးဒျဆီကို ပို့ပေးဖို့ တာဝနျပေးခဲ့ပါတယျ။ ဒီအခြိနျမှာတော့ ဂီတနျဂလြီရဲ့ အခကျအခဲဖွရှေငျးပေးဖို့ ဘဝါးနီးဆငျ့ တဈယောကျ ရောကျလာခဲ့ပါတော့တယျ။ ဝါးနီးဆငျ့ဆိုတာ ဂီတနျဂလြီရဲ့ သကျတောငျစောငျ့ဟောငျး တဈယောကျနုနယျတဲ့ အတှအေ့ကွုံနဲ့ သူ(မ)ကို အကောငျးဆုံး ကူညီပေးပွီး အဖကျဖကျက ပံ့ပိုးပေးခဲ့သူ အကွောငျးအမြိုးအမြိုးကွောငျ့ ဂီတနျဂလြီနားက ထှကျသှားခဲ့ရပမေယျ့ သူ(မ) ဒုက်ခရောကျနတေော့ အပွေးရောကျလာတဲ့ လူမြိုး ဂီတနျဂလြီက သူ့လှတျဖို့ထကျ ဒလေီကို ပို့မယျ့ ဘဏ်ဍာတှကေိုသာ ပွနျအရယူခိုငျးခဲ့ပါတယျ။ ဘဝါးနီးတဈယောကျ ဘဏ်ဍာတှကေို လမျးက ဖွတျလုဖို့ အစီအစဉျဆှဲရပါတော့တယျ။
ဒီအခြိနျမှာတော့ သူ့ရဲ့ ဘျောဒါတှေ ဖွဈတဲ့ ဂူရုကွီးနဲ့ ဒလီယားတို့နဲ့ အတူ ဘဏ်ဍာတှကေို ပွနျလုပါတော့တယျ။ ဘဝါးနီး ဂူရုကွီးနဲ့ ဒလီးယားတို့ အပွငျ ဂီတနျဂလြီရဲ့ လူယုံတဈယောကျဖွဈတဲ့ ဆနျဂနြာကပါ ဝငျရောကျကူညီပေးခဲ့ပွီး ဘဏ်ဍာတှသေယျသှားတဲ့ကို လုဖို့ ဖွဈလာပါတော့တယျ။ သူတို့စီစဉျထားသလို အလှယျတကူပဲ ဖွဈမလား?.. ဒါပမေဲ့ ဒီကားကို တာဝနျယူ ပို့ဆောငျပေးမယျ့သူကတော့ မဂြော ဆဟဲရျ ဆငျ့ဘဝါနီး(အဂြေးဒီဗနျ) , ဒလီယား (အငျမရနျးဟကျရျှမီး) မဂြောဆဟဲရျဆငျ့ (ဗဈဒျရှတျဂမြာဝဲလျ) တို့ရဲ့ ထိပျတိုကျတှမှေု့ကွီးကို အကျရှငျအလနျးစားတှနေောကျခံအသံအမှနျအကနျကွီးတှနေဲ့ ခံစားကွညျ့လိုကျပါဦး။
1975-1977 နှစ်တွေမှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာ အရေးခင်းကာလဖြစ်ပြီး အရေးပေါ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေ ထုတ်ပြန်ထားပြီး တိုင်းပြည်ရဲ့ လူဦးရေ တစ်ဝက်လောက်က ဆန္ဒတွေပြ သပိတ်တွေ မှောက်ပြီး ထောင်ထဲတွေ ရောက်နေပါတယ်။ အစိုးရဆိုတာ နာမည်သာ ရှိပြီး ပြည်သူလူထုကို ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်နိုင်တာကလည်း ဆိုင်ရာ ဆိုင်ရာ အကြီးအကဲတွေ ဘုရင်မျိုးရိုးဟောင်းတွေပဲ တာဝန်ယူစောင့်ရှောက်ပေးနေတာပါ။ ရာဂျစ်တန် မြို့ကိုလည်း ဘုရင်ကြီး ဆုံးပါးသွားပေမယ့် အသက်အရွယ်နဲ့ မလိုက်အောင် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ မင်းသမီး ဂီတန်ဂျလီက ကူညီပေးနေပါတယ်။
ဘုရင်စနစ်က ဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီး ဘုရင့်အခွန်ထမ်း စနစ်လည်း မရှိတောပေမယ့် မျိုးရိုးစဉ်ဆက် ပိုင်ဆိုင်လာတဲ့ ဘဏ္ဍာတွေနဲ့ပဲ ပြည်သူတွေကို ထောက်ပံ့နေပါတယ်။ ပြသာနာရဲ့ အစပဲ ပြောရမလား ပါတီတစ်ခုမှာ အစိုးရအာဏာကို လွဲအပ်ထားတဲ့ ဆန်ဂျီးဒ်ဆိုတဲ့ အာဏာပိုင်က အမျိုးသမီးတစ်ဦးတည်း ဖြစ်တဲ့ ဂီတန်ဂျလီကို ထိကပါးယိကပါးလုပ်မယ်ကြံပေမယ့် ဘုရင့်သွေးဖြစ်တဲ့ ဂီတန်ဂျလီကို ထိလို့တောင် မရခဲ့ပါဘူး။ ပါတီပွဲက လူပုံအလယ်မှာ အရှက်ကွဲခဲ့ရတဲ့ ဆန်ဂျီးဒ်က ရှက်ရမ်းရမ်းပြီး ယုတ်မာဖို့ ကြံစည်ပါတော့တယ်။ ဘုရင်စနစ်ဖြတ်သိမ်းပြီး ဘုရင့်အခွန်စနစ် ဖြတ်သိမ်းလိုက်ရင် ဘုရင်မျိုးရိုးတွေက ပိုင်ဆိုင်သမျှ ဘဏ္ဍာအားလုံးကို အစိုးရလက်ထဲကို ပြန်အပ်ရပါတယ်။ ဂီတန်ဂျလီကတော့ တိုင်းရေးပြည်ရေး အခက်အခဲတွေမှာ သူ့လက်အောက်က ပြည်သူတွေ အတွက် အသုံးချဖို့ ဘဏ္ဍာတွေကို မအပ်ခဲ့ပါဘူး။ ဒီဘဏ္ဍာတွေရှိတာကို သိပြီး ဆန်ဂျီးဒ် ယုတ်မာပါတော့တယ်။
အာဏာကို အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး ဘဏ္ဍာတွေကို အပိုင်သိမ်းပြီး ဂီတန်ဂျလီကို ဖမ်းချုပ်ခဲ့ပါတော့တယ့်။ ဘဏ္ဍာအားလုံးကို ဒေလီက ဆန်ဂျီးဒ်ဆီကို ပို့ပေးဖို့ တာဝန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာတော့ ဂီတန်ဂျလီရဲ့ အခက်အခဲဖြေရှင်းပေးဖို့ ဘဝါးနီးဆင့် တစ်ယောက် ရောက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ ဝါးနီးဆင့်ဆိုတာ ဂီတန်ဂျလီရဲ့ သက်တောင်စောင့်ဟောင်း တစ်ယောက်နုနယ်တဲ့ အတွေ့အကြုံနဲ့ သူ(မ)ကို အကောင်းဆုံး ကူညီပေးပြီး အဖက်ဖက်က ပံ့ပိုးပေးခဲ့သူ အကြောင်းအမျိုးအမျိုးကြောင့် ဂီတန်ဂျလီနားက ထွက်သွားခဲ့ရပေမယ့် သူ(မ) ဒုက္ခရောက်နေတော့ အပြေးရောက်လာတဲ့ လူမျိုး ဂီတန်ဂျလီက သူ့လွတ်ဖို့ထက် ဒေလီကို ပို့မယ့် ဘဏ္ဍာတွေကိုသာ ပြန်အရယူခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ ဘဝါးနီးတစ်ယောက် ဘဏ္ဍာတွေကို လမ်းက ဖြတ်လုဖို့ အစီအစဉ်ဆွဲရပါတော့တယ်။
ဒီအချိန်မှာတော့ သူ့ရဲ့ ဘော်ဒါတွေ ဖြစ်တဲ့ ဂူရုကြီးနဲ့ ဒလီယားတို့နဲ့ အတူ ဘဏ္ဍာတွေကို ပြန်လုပါတော့တယ်။ ဘဝါးနီး ဂူရုကြီးနဲ့ ဒလီးယားတို့ အပြင် ဂီတန်ဂျလီရဲ့ လူယုံတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဆန်ဂျနာကပါ ဝင်ရောက်ကူညီပေးခဲ့ပြီး ဘဏ္ဍာတွေသယ်သွားတဲ့ကို လုဖို့ ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ သူတို့စီစဉ်ထားသလို အလွယ်တကူပဲ ဖြစ်မလား?.. ဒါပေမဲ့ ဒီကားကို တာဝန်ယူ ပို့ဆောင်ပေးမယ့်သူကတော့ မေဂျာ ဆဟဲရ် ဆင့်ဘဝါနီး(အဂျေးဒီဗန်) , ဒလီယား (အင်မရန်းဟက်ရ်ှမီး) မေဂျာဆဟဲရ်ဆင့် (ဗစ်ဒ်ရွှတ်ဂျမာဝဲလ်) တို့ရဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့မှုကြီးကို အက်ရှင်အလန်းစားတွေနောက်ခံအသံအမှန်အကန်ကြီးတွေနဲ့ ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦး။
Ajay Devgn Emraan Hashmi Esha Gupta Ileana D'Cruz Priyanshu Chatterjee Sanjay Mishra Sharad Kelkar Sunny Leone Vidyut Jammwal
Option 1 server.mfile.cloud 636 MB SD (480p)
Option2storage.msubmovie.com 636 MB SD (480p)
Option3yuudrive.me 636 MB SD (480p)
Option4sharer.pw 636 MB SD (480p)
Option5storage.msubmovie.com 1.5 GB HD (1080p)